Yakatumirwa ne Tranquillus | June 18, 2018 | hofisi
Kunyangwe Windows iri kuwedzera yakazara sisitimu yekushandisa, haina kukwana pachayo kunyangwe zvichangobva kugadziridzwa.
Kushandisa Windows PC pasina kuisa imwe software kunogona kukurumidza kudzikamisa kushandiswa kwayo, kunyangwe mabasa akareruka.
Takasarudza iwe 10 software inokosha uye yakasununguka kuti idziwe paWindows.
Windows yatova neantivirus software nekukasira, Windows Defender, asi kudzivirira kwayo kudiki chete.
Saka kukudzivirira nekubudirira uye kusununguka pamirwere uye mamwe marware, tinokukurudzira kuti uite Avast.
Iyi software inoramba iri referensi maererano neantivirus, nekuti zvakare yakazara kwazvo, inotarisisa mae-mail ako pamwe nemapeji eWebhu aunoshanyira.
Saka paunoshanyira nzvimbo inogona kunge ine ngozi, iwe unoudzwa.
A suite of office software:
Makomputa ese anowanikwa pamusika pasi peWindows atove nepre-installed suite yeoffice software: Microsoft Office. Asi aya ndiwo mavhezheni ekuedza, saka haugone kuashandisa zvizere usina kutenga rezinesi.
Zvisinei, pane suites zve office automation software zvakasununguka zvachose sekutaura Open Office.
Ndiyo yemahara yakaenzana neMicrosoft Office, word processing kana spreadsheet zvinokwanisika kuita zvese zvese neyi software yepachena.
Ese mabhurawuza ewebhu anoratidza maPDF, asi Acrobat Reader chete inokutendera kuti ubatsirwe kubva kune maturusi ezvinyorwa zvako, kumaka kwemabhokisi kana siginecha yemagetsi yemagwaro.
VERENGA Unyanzvi hunokosha hwokukuridzira muhofisi yekugadzira
By default Windows haina Flash Player, saka unofanirwa kuidhawunirodha zvakasiyana. Izvo zvakakosha pakuratidza akawanda mapeji, mifananidzo, mitambo midiki nemavhidhiyo paWebhu.
Kuridza mamwe maodhiyo kana mavhidhiyo mafomati nekombuta media player, unozofanirwa kudhawunirodha nekuisa macodecs.
VLC inonzi lightweight multimedia player iyo inobatanidza huwandu hwe codecs mukati me software uye nokudaro inokubvumira kuti uverenge marudzi ose emafaira.
Skype ishu software inokubvumira kuti uite runhare kubva kombiyuta kana kuti foni kusununguka. Zvinogona zvakare kuita mavhidhioconferensi nevanhu vazhinji.
Zvinogoneka zvakare kuishandisa kutumira mameseji akanyorwa kana mafaera.
A software yekuchenesa kombiyuta yako:
Sezvo iwe uchidhawunirodha mafaera akawanda, zvinodikanwa kugara uchichenesa komputa yako kuti uwedzere kuita kwayo. CCleaner inochenesa mafaira enguva pfupi uye mamwe maforodha system, asiwo akawanda asina basa mafaera anogadzirwa neakasiyana komputa software.
Software to uninstall software:
Revo Uninstaller iso software iyo inoita kuti uninstallation iwedzere.
Mushure mokutanga kusunungura ne classic Windows system, software iyi yepachena inotsvaga nzira yekuwana uye kubvisa zvose zvakasara mafaira, folders uye makiyi.
Gimp kuita mifananidzo yekugadzirisa:
Iyo Gimp mhinduro chaiyo kune chero munhu anoda kupinda mukugadzirisa mufananidzo. Iyo yakakwana kwazvo uye inokutendera iwe kuti uzive nezve editing yemifananidzo. Mazhinji sarudzo anowanikwa senge layer manejimendi, kugadzira script uye zvimwe zvakawanda.
7-zip kuti decompress mafaira nokukurumidza:
Kufanana neWinRar, 7-Zip inobata mamwe akawanda mafomati akajairwa, seRAR kana ISO, pamwe neTAR.
Iwe uchakwanisawo kuchengetedza mafaira ako akaomeswa nephasiwedi uyewo kuparadzanisa faira yakadhindwa kuva mafaira akawanda.
10 pasina zvinodiwa software June 18th, 2018Tranquillus
zvinoteveraKupinda zvinodiwa uye visa uye nzira dzepasipoti muFrance